လူတွေ ဘာကြောင့် ဒေါသထွက်ရင် အော်ပြောသလဲ ? ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:29 PM | No မှတ်ချက် | Videos for knowledge ဗဟုသုတ ဗွီဒီယိုများ
မြစ်ဆိပ်သို့ ရောက်သော် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဒေါသတကြီးနှင့် အော်နေကြသော မိသားစုတစ်စုကို တွေ့လေ၏။ ဤတွင် သူတော်စင်သည် တပည့်တို့ဖက်သို့လှည့်၍ အပြုံးဖြင့် မေး၏။
"တပည့်တော်ထင်တာတော့... တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုဟာ ဒေါသ ဖြစ်စဉ် ခနမှာ ပျောက်သွားတဲ့ အတွက် ကြောင့် လူတွေ အော်ရတယ် ထင်ပါတယ်"
ဒီအခါမှာ သူတော်စင်က ပြန်မေးတယ်။ "ဒါပေမယ့်လို့ မိမိ ဒေါသ ထွက်နေတဲ့ လူဟာ မိမိအနားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင် အကျယ်ကြီးပြောလို့ အကျိုးများလာပါ့မလားကွယ့်... တိုးတိုးညင်သာစွာ နားလည်အောင်ပြောတာဟာ လူတစ်ယောက်ကို ပိုနားဝင်စေမယ်မဟုတ်လား။"
ဒီလို ကွာခြားသွားရတဲ့ အကွာအဝေးအလိုက် သူတို့ရဲ့စကားသံ ဟာလဲတစ်ဖက်သား ကြားရအောင် ကျယ်လာလေ့ ရှိတယ်။ ဒေါသ ထွက်ရလေလေ... ဒီဒေါသ ကြောင့် ဝေးသွားတဲ့ တစ်ဖက်နှလုံးသား ကြားနိုင်အောင် အသံကို ပို၍ ပို၍ ကျယ်ရလေလေပဲ။"
နှလုံးသားချင်း မဝေးစေအောင် တတ်နိုင်သလောက်ထိန်းကြပါ.. အကယ်၍ ပြောမိဆိုမိရင်.. တစ်ခါ... နှစ်ခါ မသိသာပေမယ့်.. တစ်ချိန်ချိန်မှာ နှလုံးသားချင်း အဝေးဆုံးကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်တော့မှ ပြန်နီးနိုင်မှာမဟုတ်တော့...ပါဘူး။